युरोकप छनोटः स्टोनियामाथि जर्मनीद्वारा गोलको वर्षा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
युरोकप छनोटः स्टोनियामाथि जर्मनीद्वारा गोलको वर्षा
एजेन्सी । युरोकप छनोटमा जर्मनीले स्टोनियालाई ८–० गोल अन्तरले हराएको छ । समुह सीको खेलमा पुर्व विश्व विजेता टोली जर्मनीले फराकिलो अन्तरको जित हासिल गरेको हो ।
जर्मनीको जितमा मार्को रिउसले दुई तथा सर्ज गनाब्रीले समान दुई दुई गोल गरे । यस्तै गोल लियोन गोरोत्जका, इल्के गुन्डोगोन, टिमो वर्नर र लिरो सानेले १–१ गोल गरे। जर्मनीले सुरुवाती तीन खेलमा जित निकाल्न सफल भएको छ । अर्को खेलमा आयरल्याण्ड टोलीले बेलारुसमाथि १–० को जित निकालेको थियो ।
जर्मनी ३ खेलबाट ९ अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ । नर्दन आयरल्याण्ड १२ अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ । बेलारुस अंक विहिन हुदै चौथो र स्टोनिया तालिकाको पुछारमा छ ।